မကြာခင်သူ လာတော့မယ့် သတိထားကြအုံးနော် ဘုရားတရား လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြပါ - Tameelay
ကမ္ဘာမှာရော မြန်မာပြည်မှာပါ ပြင်းထန်တဲ့သဘာဝ ဘေးအန္တရယ်တွေ ကျရောက်နေတယ်
ရေဘေး ငလျင်ဘေး မခံစားရတဲသူတွေကလည်း ငါတို့ ကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးလို့ မထင်နဲ့ 
ဒါတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်စီးပွားရေးတွေနိမ့်ကျမယ် ဘယ်လောက်ပဲ စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါစေ အကြောင်းတခုခုနဲ့ လွဲချော်မယ်။
အလုပ်တွေဘယ်လောက်ပဲ တိုးလုပ်ပါစေ လှုပ်လေ မြုပ်လေ ဖြစ်မယ် လုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမယ် ခင်လှပါတယ်ဆိုတဲ
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လည်း အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲမယ်။
နောက်ဆုံးကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်း အရင်းတွေနဲ့ တောင် ပဋိပက္ခုဖြစ်စရာအကြောင်းပေါ်လာမယ်
အထူးသဖြင့် မိသားစုဝင်တိုင်းမှာ စိတ်ဆင်းရဲစရာ အကြောင်းတခုခု အမြဲတမ်း ဝင်ရောက်မယ် သဘာဝဘေးအန္တရယ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်ကြမယ်။
ကိုယ့်မိဘသတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ လူမမယ်လေးတွေကိုမဒိန်းကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ နာနာဘဝပူးတယ်ကပ်တယ်
စတဲ့ မကြားဝံ့မနာသာ သတင်းတွေကြားနေရတယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက် မကြာခဏသေမယ် ပရလောကသားတွေဟာ သူတို့ စားဖို့ သောက်ဖို့ အတွက်
လူ့ လောကကို အကျည်းတန်အောင်လုပ်ကြလိမ့်မယ် ကိုယ်ကျင့်တရားတွေနိမ်ကျနေကြတဲ့အတွက်
ပရလောကသားတွေဟာ အရက်သမားတွေနဲ့မိန်းမတွေ ခလေးတွေကိုပူးဝင်နှောက်ယှက်လိမ့်မယ်။
ကိုယ့်သမီးကိုယ်မဒိန်းကျင့်တာတို့ကိုယ့်မိဘ ကိုယ်သတ်တာတို့အရွယ်မရောက်သေးသူတွေကို မုဒိန်းကျင့်တာတို့ ဆိုတာ သူတို့ လက်ချက်ပါပဲ
ဘုရားတရားလုပ်တဲ့သူ တရားစာပေရွတ်ဖတ်သူ သာသနာပြုသူတွေကိုတော့ အနားကပ်လို့ မရတဲ့အတွက် နှောင့်ယှက်ဘို့ မရဘူး။
တချိန်က ပြည်သူတွေဆီကနေ မတရားရှာထားတဲ့ ဝိသမလောဘသားတွေရဲ့ ပိုက်ဆံတွေဟာ အကြောင်းးအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြန်ကုန်မယ်
ဝိသမလောဘသားတွေ ပျက်စီးမယ်သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ရဟန်းတွေလည်း ပင်ပမ်းမယ် စွာနဲ့သာသနာပြုရမယ်။
ရဟန်းတု ရဟန်းယောင် သာသနာကိုခုတုံးလုပ်သူတွေပျက်စီးမယ် သူတော်ကောင်းတော်တော်များများဟာ လူ တွေကိုဥပေက္ခာပြုကြလိမ့်မယ်။
၂၀၂၀ မတိုင်ခင် ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးကြီးများ မကြာခဏလာမယ် ။၂၁၁၈ .၂၀၁၉ ခုနှစ်ဟာ သဘာဝဘေးအန္တရယ်အဆိုးဆုံးနှစ်ဖြစ်မယ်
ကမ္ဘာ့လူဦးရေတော်တော်များများဟာ သေကြေပျက်စီးကြလိမ့်မယ် အားကိုးရာအစစ်အမှန်မရှိတဲ့အတွက် ပျက်စီးမှု့ပိုများမယ်။
နောက်ပိုင်း ကိုးကွယ်မှု့တွေကို ဆန်းစစ်လာကြပြီး ဘာသာပေါင်းစုံဟာဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကို စုရုံးလာကြလိမ့်မယ်။
တနေ့ ကျရင် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ ခြေချင်းလိမ်ကြလိမ့်မယ်။ ၂၀၂၀ ကျော်လျှင် သာသနာပြုမင်း ပေါ်မယ်။
သာသနာပြုနိုင်သော တရားထူးတရားမြတ်ရနိုင်သော နတ်သား နတ်သမီးများ လူ့ ပြည်ကိုလာဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီ သာသနာပြုမင်းပေါ်တော့မှာမို့မကောင်းသူတွေကို စဖယ်နေပြီ
သာသနာတော်ကို ပျက်စီးအောင်လုပ်သူမှန်သမျှ အကုန်ပျက်စီးမယ် လူတွေကမသိပေမဲ့ နတ်တွေ ဝိဇ္ဇာတွေက ကြိုမြင်တဲ့အတွက် သာသနာတော် ထွန်းကားဖို့ 
အပြောင်းအလဲတွေကို ကူညီကြလိမ့်မယ်အခု ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်နေတဲ့ ခလေးတွေဟာ သာသနာပြုမင်းကို ကြိုဖို့ 
စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာကိုမြှင်တင်ပေးကြရပြီ အားလုံးပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ မြန်မာရော ကမ္ဘာကြီးရော သာသနာတော်ပါ အားလုံး ကြည်လင်ဝင်းပ လာပါလိမ့်မယ်။
အထူးသတိပေးချင်တာကတော့ အပျက်အစီးထဲမှာ ပါမသွားချင်ဘူးဆိုရင် ဘုရားတရား ပိုလုပ်ကြပါ အရက်သေစာရှောင်ပါ။
အမဲသားမစားပါနဲ့ရတနာသုတ်နဲ့ ပရိတ်ပဋ္ဌာန်းတွေကို စွမ်းနိုင်သလောက်ရွတ်ကြပါ
ရတနာသဲုးပါးကို မစော်ကားကြပါနဲ့လို သတိပေးချင်ပါတယ်။
စေတနာမေတ္တာအရင်းခံဖြင့် ထပ်ဆင့်မျှဝေပါသည်. ရေးသားသူ – ဦးမြင့်ခိုင်
ကမ်ဘာမှာရော မွနျမာပွညျမှာပါ ပွငျးထနျတဲ့သဘာဝ ဘေးအန်တရယျတှေ ကရြောကျနတေယျ
ရဘေေး ငလငျြဘေး မခံစားရတဲသူတှကေလညျး ငါတို့ကတော့ ဘာမှ မဖွဈဘူးလို့မထငျနဲ့
ဒါတှေ ဖွဈလိမျ့မယျစီးပှားရေးတှနေိမျ့ကမြယျ ဘယျလောကျပဲ စီစဉျထားတဲ့ကိစ်စဖွဈပါစေ အကွောငျးတခုခုနဲ့လှဲခြျောမယျ။
အလုပျတှဘေယျလောကျပဲ တိုးလုပျပါစေ လှုပျလေ မွုပျလေ ဖွဈမယျ လုပျငနျးရှငျအခငျြးခငျြးစိတျဝမျးကှဲမယျ ခငျလှပါတယျဆိုတဲ
သူငယျခငျြးတှနေဲ့လညျး အခငျြးခငျြး စိတျဝမျးကှဲမယျ။
နောကျဆုံးကိုယျ့ဆှမြေိုးသားခငျြး အရငျးတှနေဲ့တောငျ ပဋိပက်ခုဖွဈစရာအကွောငျးပျေါလာမယျ
အထူးသဖွငျ့ မိသားစုဝငျတိုငျးမှာ စိတျဆငျးရဲစရာ အကွောငျးတခုခု အမွဲတမျး ဝငျရောကျမယျ သဘာဝဘေးအန်တရယျကွောငျ့ ဒုက်ခရောကျကွမယျ။
ကိုယျ့မိဘသတျတယျဆိုတဲ့သတငျးတှေ လူမမယျလေးတှကေိုမဒိနျးကငျြ့တယျဆိုတဲ့ သတငျးတှေ နာနာဘဝပူးတယျကပျတယျ
စတဲ့ မကွားဝံ့မနာသာ သတငျးတှကွေားနရေတယျ။ အစုလိုကျအပွုံလိုကျ မကွာခဏသမေယျ ပရလောကသားတှဟော သူတို့စားဖို့သောကျဖို့အတှကျ
လူ့လောကကို အကညျြးတနျအောငျလုပျကွလိမျ့မယျ ကိုယျကငျြ့တရားတှနေိမျကနြကွေတဲ့အတှကျ
ပရလောကသားတှဟော အရကျသမားတှနေဲ့ မိနျးမတှေ ခလေးတှကေိုပူးဝငျနှောကျယှကျလိမျ့မယျ။
မကွာခငျသူ လာတော့မယျ့ သတိထားကွအုံးနျော ဘုရားတရား လကျတှကေ့ငျြ့သုံးကွပါ
ကိုယျ့သမီးကိုယျမဒိနျးကငျြ့တာတို့ ကိုယျ့မိဘ ကိုယျသတျတာတို့ အရှယျမရောကျသေးသူတှကေို မုဒိနျးကငျြ့တာတို့ဆိုတာ သူတို့လကျခကျြပါပဲ
ဘုရားတရားလုပျတဲ့သူ တရားစာပရှေတျဖတျသူ သာသနာပွုသူတှကေိုတော့ အနားကပျလို့မရတဲ့အတှကျ နှောငျ့ယှကျဘို့မရဘူး။
တခြိနျက ပွညျသူတှဆေီကနေ မတရားရှာထားတဲ့ ဝိသမလောဘသားတှရေဲ့ ပိုကျဆံတှဟော အကွောငျးးအမြိုးမြိုးနဲ့ပွနျကုနျမယျ
ဝိသမလောဘသားတှေ ပကျြစီးမယျသာသနာ့ဝနျထမျးရှငျရဟနျးတှလေညျး ပငျပမျးမယျ စှာနဲ့ သာသနာပွုရမယျ။
ရဟနျးတု ရဟနျးယောငျ သာသနာကိုခုတုံးလုပျသူတှပေကျြစီးမယျ သူတျောကောငျးတျောတျောမြားမြားဟာ လူ တှကေိုဥပက်ေခာပွုကွလိမျ့မယျ။
၂၀၂၀ မတိုငျခငျ ဘေးဆိုးကပျဆိုးကွီးမြား မကွာခဏလာမယျ ။၂၁၁၈ .၂၀၁၉ ခုနှဈဟာ သဘာဝဘေးအန်တရယျအဆိုးဆုံးနှဈဖွဈမယျ
ကမ်ဘာ့လူဦးရတေျောတျောမြားမြားဟာ သကွေပေကျြစီးကွလိမျ့မယျ အားကိုးရာအစဈအမှနျမရှိတဲ့အတှကျ ပကျြစီးမှု့ပိုမြားမယျ။
နောကျပိုငျး ကိုးကှယျမှု့တှကေို ဆနျးစဈလာကွပွီး ဘာသာပေါငျးစုံဟာဗုဒ်ဓဘာသာဘကျကို စုရုံးလာကွလိမျ့မယျ။
တနကေ့ရြငျ ကမ်ဘာ့ခေါငျးဆောငျတှေ ရှတေိဂုံဘုရားပျေါမှာ ခွခေငျြးလိမျကွလိမျ့မယျ။ ၂၀၂၀ ကြျောလြှငျ သာသနာပွုမငျး ပျေါမယျ။
သာသနာပွုနိုငျသော တရားထူးတရားမွတျရနိုငျသော နတျသား နတျသမီးမြား လူ့ပွညျကိုလာဖို့ပွငျဆငျနကွေပွီ သာသနာပွုမငျးပျေါတော့မှာမို့ မကောငျးသူတှကေို စဖယျနပွေီ
သာသနာတျောကို ပကျြစီးအောငျလုပျသူမှနျသမြှ အကုနျပကျြစီးမယျ လူတှကေမသိပမေဲ့ နတျတှေ ဝိဇ်ဇာတှကေ ကွိုမွငျတဲ့အတှကျ သာသနာတျော ထှနျးကားဖို့
အပွောငျးအလဲတှကေို ကူညီကွလိမျ့မယျအခု ယဉျကြေးလိမ်မာသငျနတေဲ့ ခလေးတှဟော သာသနာပွုမငျးကို ကွိုဖို့
စာရိတ်တပိုငျးဆိုငျရာကိုမွှငျတငျပေးကွရပွီ အားလုံးပွီးဆုံးခြိနျမှာတော့ မွနျမာရော ကမ်ဘာကွီးရော သာသနာတျောပါ အားလုံး ကွညျလငျဝငျးပ လာပါလိမျ့မယျ။
အထူးသတိပေးခငျြတာကတော့ အပကျြအစီးထဲမှာ ပါမသှားခငျြဘူးဆိုရငျ ဘုရားတရား ပိုလုပျကွပါ အရကျသစောရှောငျပါ။
အမဲသားမစားပါနဲ့ ရတနာသုတျနဲ့ပရိတျပဋ်ဌာနျးတှကေို စှမျးနိုငျသလောကျရှတျကွပါ
ရတနာသဲုးပါးကို မစျောကားကွပါနဲ့ လို သတိပေးခငျြပါတယျ။
စတေနာမတ်ေတာအရငျးခံဖွငျ့ ထပျဆငျ့မြှဝပေါသညျ. ရေးသားသူ – ဦးမွငျ့ခိုငျ
ယနေ့ခေတ်မှာ စမတ်ဖုန်းယဉ်ကျေးမှုဟာ တဖြည်းဖြည်းတိုးတတ်လာခဲ့ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဟာ လူသားတွေရဲ့ဘ၀ကို များစွာအထောက်အကူပြုလာပါပြီ။ စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာလည်း ကြောက်ခမန်းလိလိကိုတိုးတတ်လာခဲ့ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ရင် အရွေးမမှားဖို့တော့လိုပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းဝယ်ရင် ဆောင်ရန်လေးတွေကို ကျနော်တို့ နည်းပညာချစ်သူကနေ ဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်။ (၁) ဖုန်းဆိုင်ကအရောင်းဝန်ထမ်းလေးတွေရဲ့စကားကို ကျနော်တို့ အပြည့်အ၀ယုံကြည်နေလို့မရတော့ပါဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံဖူးပါတယ်။ သူတို့ဖုန်းရောင်းထွက်ဖို့အတွက် over တွေလုပ်ပြီးပြောနေတာမျိုး၊ ကိုယ်ရောင်းမည့် Product …
၁၉၅၅ မှာ စတင်ပျံသန်းခဲ့ပြီး ၃၇ နှစ်ကြာမှ မြေပြင်ပေါ်ပြန်ရောက်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်
ဒါကတော့ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာတကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ…။ သိပြီးတဲ့သူတွေရှိပေမယ့် အခုထိငြင်းခုံနေရ တုန်းပါပဲ…။ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကရော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ ဒီဖြစ်ရပ်အကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦး…။ ၁၉၉၂၊ ၉ လပိုင်း၊ ၉ ရက်နေ့မှာ တောင်အမေရိကတိုက် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ လေယာဉ်ထိန်းချုပ်ရေးတာဝါမှာ ထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်…။ ရေဒါမှာပေါ်မလာပဲနဲ့ လေယာဉ်တစ်စင်းက ဆိုက်ရောက်လာခဲ့တာပါ…။ ထို့နောက်စုံစမ်းမေးမြန်းရာ လေယာဉ်ဟာ …
သာမဏေကျော်ပထမအဆင့်ကိုဝင်ရောက်ဖြေဆိုမယ့် အသက်၁၁-နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ကြည်ညိုဖွယ်ရာအာဂသတ္တိရှင်ကိုရင်လေး
သာမဏေကျော်ပထမအဆင့်ကိုဝင်ရောက်ဖြေဆိုမယ့် ကြည်ညိုဖွယ်ရာအာဂသတ္တိရှင်ကိုရင်လေး ဒီကျောင်းတိုက် `သာမဏေကျော်´တွေထဲမှာ #အသက်၁၁-နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ ဒီကိုရင်လေးဟာ အငယ်ဆုံးကိုရင်လေးဖြစ်ပါတယ်.. သာမဏေကျော် ပထမဆင့်ကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမယ့် အာဂသတ္တိရှင်လေး ကိုရင်လေးတစ်ပါးပေါ့…။ အသက်ငယ်ပေမယ့်လည်း…ဓမ္မပဒဂါထာအချို့နှင့် (ပရိတ်ကြီး ၁၁-သုတ်+ သန္ဓိ+နာမ်+ကာရက+အာချာတ် သုတ်စဉ်ရော သုတ်နက်ပါ အကုန်ရပြီးသားဖြစ်သည်) ပဲခူးဗုဒ္ဓတံခွန်ရိပ်သာကျောင်းတိုက် ကိုရင် ၁၂ ပါးထဲမှ သူဟာ …